Igbo Radio - News Reports in Igbo Language - Saskatchewan Magazine of African Arts and Cultures - Contact
Search ... Abalị 29 nke ọnwa Mee bụ ụbọchị ezum-ike ọchịchị onye kwuo uche ya	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, May 29, 2017	Ala Naịjirịa eweputego taa bụ Mọnde, abalị 29 nke ọnwa Mee, dịka ụbọchị ezum-ike ndị ọrụ maka mmemme ọchịchị onye kwuo uche ya. Ozi anyị nwetere site n’aka ngalaba mgbasa ozi n’asụsụ Igbo nke ụlọ ọrụ Voice of Nigeria kwuru n’onye Mịnịsta na-ahụ maka ịhe na eme n’ala Naịjirịa bụ Adulrahman Bello Dambazau, onye lagoro ezum-ike nka dịka Lieutenant General, kelere ndị Naịjirịa maka emume a.
Read more ...	Nnamdi Kanu enwerego onwe ya	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, April 28, 2017	Site na mkpebi onye okaịpke ukwu nyere n’ụlọ ikpe Hayị Kọt dị n’Abụja, isi obodo ala Naịjirịa, otu nwaafọ Igbo ụwa niile ma ama maka mbọ Ọ na-agba ka ndị Igbo nwete Biafra, abụrụgo onye nwere onwe ya ọzọ. Nke a mere n’abalị iri abụọ n’ise nke ọnwa Eprelu afọ 2017. Onye ọkaịkpe bụ Binta Nyako ekpebigo ka A nara Nnamdi Kanu n’aka mbe site n’ịnwete mmadụ atọ ga-akwụ narị nde naịra, were gbara ya n’aka mbe.
Read more ...	Muhammadu Buhari agala mba Moroko maka ọgbakọ	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, November 14, 2016	Onye isi ala Naịjirịa, Muhammadu Buhari, agala ọgbakọ nke iri abụọ n’ abụọ (COP22) nke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)n’olu bekee, na Marrakech nke mba Moroko.
Buhari ga-esonyekwa na mmalite ọgbakọ ahụ. Ọ ga-enwe ohere ikwu okwu maka ala Naịjirịa itinye oke ya n’agha ahụ A na-ebu megide ekpom ọkụ yana mgbanwe ihu elu igwe.
Read more ...	E nwela votu enweghị ntụkwasị obi nye onye isi ala mba Saụtụ Afrịka	Details	Written by Olua Franklin, VON	Thursday, November 10, 2016	Ụlọ nzukọ ome iwu mba Saụtụ Afrịka ga-arụrịta ụka n’ọnọdụ enweghị ntụkwasị obi n’onye isi ala mba ahụ bụ Jacob Zuma dịka oku A na-akpọ ka onye isi ala ahụ rịtuo n’ọchịchị na-abawanye.
Nnyocha nke otu ọrụ na-agba mpụ na aghụghọ ukwu wepụtara n’izu ụka gara aga na mba ahụ boro ebubo n’aka adịghị Maazị Zuma ọcha. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African National Congress (ANC) na-achị mba Saụtụ Afrịka kọwara na amụma ahụ agaghị achịta aja.
Read more ...	Onye isi-ala Naịjirịa edunyela ndị nnọchite anya maka olili ndị agha	Details	Written by Voice of Nigeria, Lagos	Monday, November 07, 2016	Presidenti Muhammadu Buhari enyela ntụzi-aka ka E dunye ndị nnọchite anya ga-aga maka olili Lt. Col. Abu Ali, bụ onye ndị Boko Haram gburu n’ụbọchị Fraịdee na Steeti Borno.
N’okwu onye isi ala:
Read more ...	A kpachiela mmadụ asatọ na-akwado ọchịchị onye kwuo uche ya na mba Kongo Demokratik	Details	Written by Voice of Nigeria	Friday, October 28, 2016	A kpachiela mmadụ asatọ bụ ndị na-agba mbọ ihụ na ọchịchị onye kwuo uche ya kwụdosiri ike na mba Kongo Demokratik. Nke a mere n’ụbọchi Nwenezdee gara aga, oge ha na-akwado ime ngaharị udo maka oge A na-egbu n’ime ntụliaka nke E ji ahọpụta onye isi ala.
Read more ...	Naịjirịa na-ebu agha megide mpụ na aghụghọ	Details	Written by Simon Oluoma, VON	Friday, October 28, 2016	Onye minista ala Naịjirịa na-ahụ maka mgbasa ozi na omenala, bụ Lai Mohammed, ekwugo na mbọ gọọmenti etiti na-agba iji wulitegharịa akunuba ala Naịjirịa agaghị amịta mkpụrụ ọbụla ma ọ bụrụ na E tinyeghị uchu n’ọgụ ahụ A na-alụso mpụ na aghụghọ.
Read more ...	Ndị agha mba Ijipt hụrụ mpempe ụgbọ elu ahụ kpọkasịrị n’oshimiri Mediterenịan	Details	Written by Igbo Service, Voice of Nigeria, Lagos	Friday, May 20, 2016	Ndị agha mba Ijipt ekwuola na a hụrụ mpempe ụgbọ elu ahụ kpọkasịrị n’oshimiri Mediterenịan. Onye okwuchite ọnụ ndị agha mba Ijipt kwuru na a hụrụ mpempe ụgbọ elu ahụ na ngwongwo ndị mmadụ nọ n’ụgbọ elu ahụ na maịlị otu narị na iri asatọ na Alegzandrịa.
Read more ...	Ndị Al Shabaab egbuola mmadụ 17 na Mogadishu	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, January 22, 2016	O pekata mpe, mmadụ 17 anwụọla n’obodo Mogadishu, isi ala mba Sọmalịa, mgbe ndị agha iyi egwu a na-akpọ Al Shabaab wakporo ndị na-enwere onwe ha aṅụrị n’ogige ụlọ oriri na nkwari a kpọrọ Beach View Café nke dị n’akụkụ mmriri Lido na Mogadishu.
Read more ...	Gọọmenti ala Naịjiria akatọọla ọgụ ịkpa oke ahụ a na-abusa ndị mmadụ na mba Sautu Afrịka	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, April 17, 2015	Gọọmenti ala Naịjiria ekpebiena n’ọgụ ịkpa oke ahụ a na-abusa ndị mmadụ na mba Sautụ Afrịka bụ ịhe ọjọọ. Naịjiria kpọrọ gọọmenti Sautu Afrịka ka o mee ihe kwesiri ekwesi, gbaa mbọ hụ n’a kwụsịrị ọgụ ahụ a na-ebusa ndị ọbịa na mba ahụ.
Read more ...	Ndị al-Shabaab egbuona mmadụ 147 na Kenya	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, April 03, 2015	O pekata mpe, mmadụ 147 anwụọna n’ụlọ akwụkwọ mahadum Garissa, ebe ndị otu al-Shabaab wakporo ndị mmadụ na Kenya. Nke a mere n’ụbọchị Tọzdee abalị abụọ nke ọnwa Eprel. Ndị otu al-Shabaab jiri egbe ogbu nnụ mmadụ ga n’ogige mahadum Garisa...
Read more ...	Nwunye onye chịburu mba Kotovua ga-aga mkpọrọ afọ 20	Details	Written by Chidi Igwe	Tuesday, March 10, 2015	Simone Gbagbo, nwunye Laurent Gbagbo, aka chịburu mba Kotovua, ga-aga mkpọrọ afọ 20 maka ịhe ndị o mere dọrọ ọgụ ahụ e jiri gbuo ọtụtụ mmadụ na mba ahụ, mgbe e mechara ntụli aka ndọrọndọrọ ọchịchị na Kotovua n’afọ 2010. O tego aka a na-ekpe nwanyị ahụ ikpe maka ịkwado na ikpalite ọgba agha...
Read more ...	Ndị soja 10 ndị Chad anwụọna n’agha Boko Haram	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, March 09, 2015	Anyị nụrụ na e gbuona mmadụ 10 ndị agha mba Chad ndị na-enyere ndị Naịjirịa aka n’ọgụ ahụ a na-alụ maka ịchụpụ ndị Boko Haram n’ugwu awụsa. Ọnụ na-ekwuru ndị agha mba Chad na mba Nije gwara ndị nta akụkọ Reuters n’ọ bụ ezi okwụ...
Read more ...	Onye isi ala mba Burundi ekwesighị ịchị agba nke atọ	Details	Written by Chidi Igwe	Sunday, March 08, 2015	E kee mba Burundi ụzọ atọ, ụzọ abụọ bụ ndị ụka Katọlik. Ndị otu okpukperechi katọlik na Burundi ekwuona n’onye isi ala mba ahụ, bụ Pierre Nkurunziza, ekwesịghị ịlọghachị n’ọchịchị. Mba Burundi na-akwado ime ntụli aka maka ịhọpụta onye isi ala n’ọnwa Junu nke afọ a.
Read more ...	Mba Senegal ahọpụtago Aliou Cisse dịka onye nlekwata otu egwuregwu bọọlụ nke mba ahụ	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, March 06, 2015	Cisse bụ Kaptin ndị otu bọọlụ mba Senegal mgbe otu ahụ mere ọfụma n’asọmụpi iko mba ụwa nke e mere n’afọ 2002. Cisse, onye nke dị afọ 38 ugbu a, ga-ewere ọkwa site n’aka nwoke onye mba Frans...
Read more ...	A kpọọna ndị mba Afrịka oku ka ha kwado ọchịchị onye kwuo uche ya	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, February 27, 2015	Onye ji aha ndị otu All Progressive Congress (APC) azọ ọkwa onye isi ala na Naịjiria, bụ Jenaral Muhammadu Buhari, akpọkuona ụmụ Afrịka niile ka ha na-akwado ọchịchị onye kwuo uche ya, n’ihi na nanị ọchịchị onye kwuo uche ya nwere...
GUCHAA AKUKO A...	Mba Togo ga-eme ntụli aka n’abalị 15 nke ọnwa Eprel	Details	Written by Chidi Igwe	Thursday, February 26, 2015	Mba Togo enweputego ozi nke na-akọwa na ha ga-eme ntụli aka nke e ji ahọ onye isi ala n’abalị 15 nke ọnwa Eprel afọ 2015. Anyị nụrụ n’aka na-achị mba ahụ, bụ Faure Gnassingbe, ekpebigo iso azọ ọkwa na ntụli aka ahụ a na-akwado ime, na-agbanyeghị n’ọtụtụ ndị obodo ahụ achọghị ka ọ lọghachị n’ọchịchị.
GUCHA AKUKO A...	Nwanyị onye Naịjiria eturula ugo mmụta mgbakọ na mwepụ na Sautu Afrịka	Details	Written by Chidi Igwe	Thursday, February 26, 2015	Otu nwanyị onye ala Naịjiria na-agụ akwụkwọ n’ogo ọka mmụta abụrụla onye a na-eṅomi eṅomi maka agụm akwụkwọ mgbakọ na mwepụ na mba Sautu Afrịka. Ọkammụta Oghenetega Ighedo nke ala Naịjiria eturula ugo dịka nwanyị izizi nwetere nzere ọka mmụta PhD n’agụmagụ mgbakọ na mwepụ.
GUCHA AKUKO A...	Ndị isi ọchịchị mba Afrịka etoola ndị agha Naịjiria	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, February 23, 2015	Ndị isi ọchịchị mba dị iche iche n’Afrịka na-eto ndị ọrụ nchekwa nke ala Naịjiria maka mbọ ha na-agba, ya na mkpụrụ ọma mbọ ha na-amịta n’ọgụ ahụ ha na-ebuso ndị Boko Haram n’ugwu awụsa. Mmeri a ndị agha na-enwete kemgbe abalị ole n’ole bụ mkpụrụ sitere na njikọ aka...
GUCHA AKUKO A...	Ọnwụ egbuole ikemba ndị Afrịka, Nelson Mandela	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Nelson Mandela, onye ndị Afrịka niile ji eme ọnụ maka ịlụ nwere onwe anwụọla. Ọnwụ gburu ya taa n'obodo ya bụ Saụtụ Afrịka.